GetFeedback: Nchọpụta Ntanetị Dị Ka Ọ Dịbeghị | Martech Zone
GetFeedback: Nyocha ndị dị na ntanetị dị ka ọ dịtụbeghị mbụ
Tọzdee, Disemba 12, 2013 Douglas Karr
Y’oburu mee nyocha n’oge na-adịbeghị anya, ịmara etu ihu njirimara onye ọrụ si arụ ọrụ nke ngwa ọdịnala ọdịnala. Ọ bụ otu n'ime nsogbu nke ịbụ onye ndu na teknụzụ - ị na-aga n'ihu na-ewu ma jikọta ikpo okwu gị yana ọ na-esiwanye ike imelite ya. Anọgidere m na-ahụ nke a site na nyiwe dị iche iche - na-ekele ịdị mma ọ mere na nyocha. Nzaghachi nwere nzaghachi, WYSIWYG interface nke na-enye gị ohere ịmepụta nyocha mara mma.
Ihe See Huru bu Ihe Inwetara - Na GetFeedback ị nwere ike ịmepụta nyocha gị nke ọma na ntanetị, wee tinye ụdị gị site na ịtinye agba, akwụkwọ edemede, akara ngosi, na onyonyo.
Nkwado onyonyo na vidiyo - onyonyo na ojiji vidiyo na-arụpụta nnabata miri emi (yana ọnụ ọgụgụ dị elu) yana nyocha ịntanetị.
anabata - N'ime 50% nke nyocha gị agaghị ele anya na ihe nchọgharị weebụ site na desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ. Ekwesiri ịhazi ngwa ọrụ nyocha taa maka ụwa nke smartphones, mbadamba na ihe nchọgharị weebụ nnukwu na obere.
Multi-ọwa nkesa - ike kesaa nyocha gị site na ọwa ọ bụla: email, weebụsaịtị gị, blog gị, ma ọ bụ ozugbo na Facebook na Twitter.
Akụkọ ozugbo - GetFeedback na-eme ka ị mata site na ịdọ aka ná ntị ma na-enyefe ọtụtụ usoro nyocha iji nweta ọtụtụ data gị.
Shakekọrịta data - Soro ndị ọrụ ibe gị kesaa nsonaazụ gị n'otu ntabi anya ka ndị otu ahụ wee nwee ike ịhụ nzaghachi, ma ọ bụ ibudata ma bupu data gị na Excel ma ọ bụ CSV.
Fnye ọnụahịa GetFeedback amalite na enweghị ọnụ ma dabere na ojiji. A na-enye ego maka ịkwụ ụgwọ kwa afọ.
Tags: nzaghachi ndị ahịantuli aka ndị ahịanyocha ndị ahịanzaghachintulinyocha
Etu esi ere ahịa B2B
Mobile Email Isiokwu Ngosipụta